Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 10/04/2021)
Cliffside Positano dia tanàna ao amin'ny faritra atsimon'i Italia ny Amalfi Coast. Araka ny angano noforonin'ny Neptune, Andriamanitry any an-dranomasina izay noho ny fitiavana ho nymph. Ny vatokilonjy beachfront sy ny hantsana, Nilahatra arabe tery amin'ny fivarotana ary ny trano fisotroana kafe no dia malaza amin'ny. Ianao sy ny vadinao dia tokony hitsidika Chiesa de Santa Maria Assunta manasongadina iray tamin'ny taonjato faha-13 Byzance olomangan'ny Maria Virjiny.
Nahoana no tsy miasa intsony ny sasany izay fampakaram-bady mofomamy and head to The Sentiero degli Dei tongotra lavitra lalana, izay mampifandray Positano hafa mahagaga tanàna amoron-tsiraka. Hamita ny andro eny amin'ny hoe nandeha amin'ny arabe fahiny, mahita ny tena toeram-pisakafoanana, ary ny trano manan-tantara maka toerana tsara eny amin'ny tehezan-tendrombohitra, ary santionany ny tena sakafo. Mety hanontany tena ianao hoe ahoana no ho mandrakizay hamela ny honeymoon!
Io tanàna mimanda kely feno Gothic maritrano no tonga lafatra ho an'ny mpivady mendrika mitady tony kely vibes tantara sy hizaha mandritra ny andro. Raha nandeha sambo dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hahita Kroasia in general-dia ndao hatrehina izany, also a great way to arrive on a volan-tantelynanomba amin'ity volana ity, Uber efa latsaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny faritra, nefa azo antoka fa tsy teny an-dalana no mety hieritreritra.